Pop-Up Exhibition Al-Bab I Isango - OYOUN
Pop-Up Exhibition · Al-Bab I Isango
Okthobha 16 - 07:00 pm
Okthobha 18 - 10:00 pm
Cofa ukuze ubhalise: https://www.eventbrite.de/e/pop-up-exhibition-al-bab-i-das-tor-tickets-124106234087
******************* Al-Bab-Isango ************************* *
U-Ammar Obeid, umenzi wefilimu waseSyria (ongenguye umyili weedrafti), uhlala eBerlin Ngexesha elidlulileyo wagqiba isicatshulwa sefilimu entsha ebizwa ngokuba yiAl-Bab ("Das Tor"), kodwa akakayifumani imali yeprojekthi yefilimu. Ngelixa uzama ukwenza isidima ngenxa yesidingo, kwavela umbono wokuba ekuqaleni le projekthi yinoveli yomzobo. Kwaye kulapho idrafti engu-Noor Yasin yangena khona, owathi kwangoko wavelisa izimvo malunga nokuba eli bali lingasetyenziswa njani.
UAl-Bab libali elithandwayo lesayensi. Isango elingaziwayo luhlobo lweentshulube ezidibanisa amagumbi e-geisha yaseJapan eKyoto ngo-1720 negumbi lehenyukazi lase-Egypt eCairo kanye emva kweminyaka engama-300. Umboniso ngoku unika imizekelo yokuqala yomsebenzi odibeneyo ka-Ammar no-Noor: imifanekiso eya kuthi isetyenziselwe ukwenza inoveli yomzobo kwikamva elibonakalayo.
U-Ammar Obeid_ Narrator, umboniso bhanyabhanya, umlawuli, umenzi wefilimu ovela eSyria, waphumelela kwiDyunivesithi yaseDamasko enesidanga kwizifundo zaseJapan ngo-2015. Ukusukela ngoko ebesebenza kunxibelelwano phakathi kwenkcubeko yama-Arabhu neyamaJapan, kubandakanya neprojekthi yakhe yothando lwama-Arab-Japan kunye neziko lenkcubeko, iOyoun Kultur NeuDenken. U-Ammar wenze iifilimu ezintlanu ezimfutshane, ezinye iiprojekthi zevidiyo kunye noxwebhu olude eSyria naseBerlin ukusukela ngo-2013, apho afota khona iziphumo zemfazwe kunye nokubaleka kumava akhe.
U-Noor Yasin_ uyilo, ufunda unxibelelwano olubonakalayo eWeißensee Kunsthochschule, eBerlin. Umsebenzi wobugcisa, ngakumbi ukuzoba, ngumnqweno wakhe. Ukufika kukaNoor eJamani, wayesabandakanyeka kwezinye iiprojeki zeencwadi, enye yazo azisa kuyo uhambo lweembacu ukuya eJamani.
UNaomi Shamir_ Umhleli wombhalo wesiNgesi. Ubugcisa buyahlulwe baba sisicatshulwa kunye nentshukumo, ngumdlalo weqonga kunye nomlingisi oqhelekileyo osebenza ngesiHebhere, isiArabhu nesiNgesi.
Ucacisa izimvo ngemizimba nangamagama ukuze abaphathe kakuhle abaphulaphuli bakhe.
UDani Dwair (IG: @ dani.dwair) _ Imvumi kunye nenjineli yesandi, bafunda ubunjineli besandi kwisebe lobuchwephesha kwiZiko lobugcisa beDramatic eDamasko.
Uyila ilizwi kwaye abambe iinjongo ezimangalisayo zeeprojekthi zakhe ngokusebenzisa iipuzzle zomculo kunye namalungiselelo.
Ngeeprojekthi zakhe, uDani uzama ukunxibelelana ngokunzulu ngakumbi nabaphulaphuli.
Qaphela ubhubhane waseCorona
Ukuze kuhanjiswane neemfuno zokuqulatha ubhubhane waseCorona, lo msitho uyakubakho ngenani eliqingqiweyo lezihlalo kunye namatikiti. Siqinisekisa ukuba izitulo kunye nabathathi-nxaxheba babekwe ngokufanelekileyo.
Ukongeza, amagama kunye neenkcukacha zonxibelelwano zabo bonke abathathi-nxaxheba ziya kurekhodwa. Siyakuqinisekisa ukuba, ukuba kukho imfuneko, idatha iya kusetyenziswa kuphela ekufumaneni imixokelelwane yosulelo.
Sicela bonke abathathi-nxaxheba ukuba bayigcine imigaqo emalunga nomgaqo womgama
Malunga nemibuzo kunye nemibuzo yeendaba, nceda usithumelele i-imeyile kule hallo@oyoun.de (DE / EN)
Yakhelwe ngo-1865, umzi-mveliso wangaphambili obizwa ngokuba yi-Oyoun kwaye usebenza njenge-anticisciplinary epicenter egxile ekuqulunqeni ubugqi, ubundlongo * ubufazi, ubufuduki kunye nobugcisa benkcubeko kunye nenkcubeko.
🎯 I-Wissmannstr. I-32, i-12049 Berlin
Asinandawo yobuhlanga, u-queerphobia, transphobia, naluphi na uhlobo lobuhlanga okanye ucalucalulo olunje ngo-anti-nobu-anti-nobuhlanga bobuJuda, naluphi na uhlobo lokuziphatha olunobundlongondlongo okanye ubundlongondlongo. I-Oyoun yindawo ekhuselekileyo yomntu wonke, iforum evulekileyo yencoko, ukugxeka kunye nendawo esimelene kuyo. Ukuba umntu othile / into ikukhathaza, nceda uye kwilungu labasebenzi abalapha ukuze bancede!
Kukho ilifti kunye nokungena kwesihlalo esinamavili kwisakhiwo. Kukho iindawo ezingathethiyo kunye nabasebenzi abanokukukhokela kwisithuba. Ngelixa izindlu zangasese zinomlinganiso womthetho, sikhuthaza iindwendwe ukuba zisebenzise naziphi na izibonelelo abazichongayo. Amapolisa okuhlamba asiyikunyanyezelwa
oku2020-10-19T12:05:10+00:00Oktobha 18th, 2020|